Vaovao - Niasa i Wenchuan County Yanmenguan faritra iasan'i DC
Station famandrihana DC
Mission sy Resposibility
Wenchuan County Yanmenguan faritra serivisy fiampangana DC dia niasa
Tamin'ny 1 septambra 2021, dia napetraka ny tobim-piantsenana ao Yanmenguan Comprehensive Service Area ao amin'ny faritr'i Wenchuan, izay no fiantsonan'ny mpamatsy vola voalohany namboarina ary napetraky ny Aba Power Supply Company an'ny State Grid of China. Ny tobim-pamokarana dia manana teboka fiampangana 5 DC, izay manana basy famandrihana 2 miaraka amina herinaratra avo lenta 120kW (vokatra 60kW isaky ny basy), izay afaka manome serivisy famandrihana ho an'ny fiara elektrika 10 miaraka. Ny teboka famerenana haingana dimy dia novokarin'i Sichuan Wei Yu Group （Weeyu） amin'ny endrika ODM ho an'ny Aba Power Supply Company an'ny State Grid Corporation of China.
"Afaka mandoa roa kWh isan-minitra izy, ary maharitra 25 minitra vao aotomin'ny fiara 50 kWh, izay mbola tena mandaitra." Andriamatoa Deng Chuanjiang, mpitantana lefitra jeneralin'ny State Grid Aba Power Supply Company, dia nampahafantatra fa ny fahavitana sy ny fiasan'ireo tobin-kaonty miasa ao amin'ny faritry serivisy Yanmenguan Comprehensive dia namarana ny tantaran'ny tsy nisy vondron'ireo tobim-piantsenana haingana ao amin'ny Prefektioran Aba, ary namaha tamin'ny fomba mahomby ny olan'ny famandrihana haingana ho an'ny tompona angovo vaovao.
Tsara ny manamarika fa ny faritanin'i Wenchuan dia miorina amin'ny faritra avo sy avo 3160 metatra. Ny fananganana tobim-pamokarana dc raha misy haavo toy izany nefa tsy misy fiatraikany amin'ny hafainganam-pandeha hafa dia manaporofo fa ny NIO elektrika dia manana ny haitao sy vokatra avo lenta eo amin'ny indostria.
Hatramin'ny volana Mey tamin'ity taona ity, ny State Grid of China dia nanangana tsimok'aretina maromaro tany amin'ny Prefektioran Aba ary nahatratra fiaraha-miasa lalina tamin'ny Sichuan Weiyu Electric Co., LTD. Amin'izao fotoana izao, ny fantsona sivy kely mankany wenchuan, misy ny tobim-pamokarana songpan dia manana fananganana, manana ny fahaizana mandany vola haingana ary manangana trano fiampangana sary iray ihany koa ny hotely jiuzhaigou Hilton, atsangana amin'ny volana septambra dia antenaina hampiharina, maoxian ny antontan-taratasim-bola any amin'ny faritany koa dia hanafainganana ny fanamboarana, aorian'ny fampiharana ny fakana vola avy any chengdu mankany jiuzhaigou dia hampiharina tanteraka.
Andriamatoa Deng Chuanjiang dia nilaza fa aorian'ny fahavitan'ny tanàna, faritany ary toerana manangasanga manandanja, ireo tranokala manangom-bokatra mitaky fananganana tranokala, ny orinasan-tserasera Grid Aba power supply dia hiorina amin'ny toe-javatra tena izy hanamafisana ny teboka iampangana azy, ary hiezaka ny handrafitra fiampangana. gara ao anatin'ny 70 ka hatramin'ny 80 kilometatra, mamaha amin'ny fomba mahomby ny olan'ny familiana fiara angovo vaovao.
Amin'ny dingan'ny famandrihana dia mila scan ny kaody ny tompo mba hampidinana ny APP ary hiasa arakaraka ny toro-hevitra amin'ny APP sy ny antontan-taratasin'entana hamenoana ny laharam-pahamehana. Amin'ny ankapobeny dia manodidina ny 60 ka hatramin'ny 70 yuan ny vidin'ny herinaratra 50 kilowatt-ora. Afaka mihazakazaka 400 ka hatramin'ny 500 kilometatra izy, ary 0,1 ka hatramin'ny 0,2 yuan isaky ny kilometatra. Raha ampitahaina amin'ny vidin'ny mihoatra ny 0,6 yuan isaky ny kilometatra ny fiara mpitondra solika tsotra, ny fiara angovo vaovao dia afaka mamonjy 0,5 yuan isaky ny kilometatra.
Tianyu Science Technology Park, No.1 lalana Tumenjiang, Deyang City, Sichuan, Sina
Ev House, Fiantsonana fiampangana Ev, Ev Charge Station, Ev Charge Stations, Charger mpitondra fiara elektrika, Charging Station Ev,